ज्योति मगर पनि जोखिममा, के कारण भयो दरबारमार्गमा लफडा ? - Everest Dainik - News from Nepal
ज्योति मगर पनि जोखिममा, के कारण भयो दरबारमार्गमा लफडा ?
काठमाडौंः आस्था राउतले प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार गर्नु ठीक एक साताअघि ज्योति मगरले मदिरा पिएर दरबारमार्गस्थित रेस्टुरेन्टका कामदारसँग अभद्र व्यवहार गरेकी छन्।
याे पनि पढ्नुस दरबारमार्गको ‘क्लब भिक्ट्री’मा आगलागी
जयनेपाल रोडमा रहेको किङ्स प्लालेस लाउन्ज बारमा भएको घटना हो यो। तर यो विषयमा जनआस्थाले सम्पर्क गर्दा उनले आफूहरू पीडित भएको सुनाइन् ।
याे पनि पढ्नुस ज्योति मगरको ‘डान्स’ ले महोत्सवमा तनाव, ५ जना पक्राउ
ज्योतिले थपिन्, ‘रेस्टुरेन्टका कामदारसँग हाम्रो लेबल मिल्दैन, उल्टै मुद्दा मामिला गर्दा इज्जतमा दाग लाग्छ भन्ने भएपछि हामीले केही गरेनौं। हामी सहेर बसेका छौं भने यो इस्युलाई चर्काउन तपाईंलाई मात्रै के चासो रु’ यो खबर आजको जनआस्था साप्ताहिकमा छापिएको छ।
ट्याग्स: किङ्स प्लालेस लाउन्ज बार, ज्योति मगर, दरबारमार्ग, लफडा